"abokufika nezidakamizwa zika-3.6m" - Ilanga News
Home Izindaba “abokufika nezidakamizwa zika-3.6m”
“abokufika nezidakamizwa zika-3.6m”
USGT Andile Kleinbooi weK9 Unit, eMgungundlovu noMnu Shaheen Suileman, ongumphenyi weMagma Security bengemuva kwemoto okutholwe kuyona izidakamizwa eCamperdown.
ATHULELWE isigqoko amapho-yisa aseCamperdown nawophiko lweK9, eMgungundlovu okuthe ngoLwesine abamba imoto ebihamba abesilisa ababili abanga-bokufika eNingizimu Afrika, ebilayishe izidakamizwa okuthiwa zingadayiswa ngo-R3.6 million ngentengo yasemgwaqweni.
Amaphoyisa kuthiwa atheleke ngaseCamperdown, emuva kokulunywa indlebe ngale moto ebiyehla ngomgwaqo owuthelawa-yeka, uN3, ilibangise eThekwini.
Kutholakale izikhwama eziwu-22 zilayishwe izidakamizwa, okuyi-heroin ewu-11.7kg ebingadayiswa u-R2 515 500 emgwa-qweni ne-crystal meth ewu-7.1Kg ebingadayiswa ngo-R1 065 000.
Kuthiwa lezi zidakamizwa bezithukuswe ngobuchule, kungelula ukuzibona njengoba bezishuthekwe phakathi kopha-hla lwemoto (panel) kwavalwa ngobunono.
Okhulumela amaphoyisa aseMgungundlovu, uSgt Mthoko-zisi Ngobese, usiqinisekisile lesi sehlakalo. Utshele ILANGA ukuthi amaphoyisa aseCamperdown alunywe indlebe ngemoto ebi-nezidakamizwa ezingavumeleki-le, abe esenza isivimbamgwaqo kuN3, eCamperdown.
Ahlabe umkhosi kwawe-K9 Unit, ecela ukulekelelwa ekuvi-mbeni le moto. Uthe kule moto bekunabesilisa abahlulekile wukuveza amaphepha abagunya-za ukuba kuleli zwe.
u-R5 000, kwathi uma kuqhutshe-kwa kupeqululwa, kwabakhona okusolisayo kwi-panel, okuphoqe ukuba amaphoyisa ayixebule, kwavela izikhwama eziwu-22 ebezinezidakamizwa.
Abasolwa bashaqwe ngama-phoyisa nemoto yabo nezidaka-mizwa bayogci-nwa esitokisini. NgoLwesihlanu bebevele eNka-ntolo yeMantshi yaseCamperdo-wn. icala labo lahlehlela inamuhla ngoMso-mbuluko.
“Basagqunywe esitokisini,” kusho uSgt Ngobese.
Wethulele oza-kwabo isigqoko ngokusabela ngokushesha uma uMkhuzi wamaPhoyisa wesiFunda,
uMajor General Phumelele Makhoba, ehlaba ikhwelo lokusebenza kanzima emapho-yiseni esifunda saseMgungu-ndlovu ukubhidliza zonke izidleke zezidakamizwa.
“Siyakwazi ukuthola abashu-shumbisa izidakamizwa, njengamanje sesifuna ongqondongqo-ndo ekugayweni kwazo okusenzima ukubathola.
“Sesithole ukuthi izidakamizwa ziyimbangela yobugebengu emphakathini njengoba kuye kuthi uma abantu sebezisebenzisile, bacabange izinto ezihlukumeza umphakathi njengokugqe-keza nokubamba inkunzi,” kusho uSgt Ngobese.
ILANGA lithole ukuthi kube nenkinga yokuthola utolika wolimi lwabasolwa, okuyikhona okwenze udaba lwahlehla.
Previous articleUMotaung uthi angeke asilibale esase-Ellis Park
Next articleKuyaqala ukufunda eDUT namuhla